ईमर्जेन्सी लाइटको व्यापार दोब्बर | गृहपृष्ठ
Home बजार ईमर्जेन्सी लाइटको व्यापार दोब्बर
ईमर्जेन्सी लाइटको व्यापार दोब्बर
पुस १८, काठमाडौं । विशेषगरी लोडशेडिङको समयमा प्रयोग गरिने इमर्जेन्सी लाइटको व्यवसाय शतप्रतिशत बढेको छ । ‘लोडशेडिङ शुरू हुनुअघि इमर्जेन्सी लाइटको व्यापार न्यून थियो,’ नेपाल विद्युतीय व्यवसायी सङ्घका महासचिव महेन्द्रकुमार राठीले भने, ‘लोडशेडिङ शुरू भएदेखि यसको व्यापार शतप्रतिशतले बढेको छ ।’ बजारमा रू. १ सयदेखि १ हजारसम्म मूल्य पर्ने विभिन्न प्रकारका इमर्जेन्सी लाइट उपलब्ध छन् । यसमध्ये सर्वसाधरणले एलईडी इमर्जेन्सी लाइट बढी रुचाउने राठीले बताए ।
बजारमा अहिले चार्ज गर्न सकिने (रिचार्जेबल) तथा नसकिने (ननरिचार्जेबल) गरी दुई प्रकारका इमर्जेन्सी लाइट उपलब्ध छन् । रिचार्जेबल लाइटलाई सौर्य ऊर्जा तथा विद्युत्बाट चार्ज गर्न सकिन्छ । आजभोलि बजारमा एफएम, क्यासेट प्लेयरलगायत सुविधा भएका इमर्जेन्सी लाइट पनि उपलब्ध छन् । यस्ता लाइटबाटै मोबाइल चार्जसमेत गर्न सकिन्छ । बजारमा उपलब्ध विभिन्न ब्राण्डका इमर्जेन्सी लाइटले ८ देखि १२ घण्टासम्म निरन्तर उज्यालो दिन सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
लोडशेडिङ शुरू भएयता अहिले दैनिक तिरुपति मार्केटिङले मात्रै करीब रू. ४० देखि ६० हजारका इमर्जेन्सी लाइट विक्री हुने गरको राठीले बताए । राठी तिरुपति मार्केटिङका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । उनका अनुसार अहिले नेपाली बजारमा इमर्जेन्सी लाइटको कारोबार दैनिक करीब रू. १० लाखसम्मको हुने गरेको छ । यसमध्ये आधा कारोबार काठमाडौं बाहिरका जिल्लाबाट हुने गरेको श्रेष्ठ जानाकारी दिए ।
अन्य समयमा भन्दा लोडशेडिङमा सीएफएल चिमको व्यवसाय पनि बढी हुने गरेको छ । अहिले इमर्जेन्सी लाइट तथा सीएफएलको व्यापार बढ्दा समग्र विद्युतीय सामग्रीको कारोबार नै ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको महाबौद्धस्थित विद्युतीय सामग्री होलसेल विक्रेता मोहन घिमिरेले बताए ।
भाजुरत्न इञ्जिनीयरिङ कम्पनीले सोलार र विद्युत्बाट चार्ज हुने फिलिप्स ब्राण्डका उद्यमी लालटिन तथा मिनी उद्यमी लालटिनको विक्री गर्दै आएको छ । ५ वाटमा उपलब्ध यस्ता लालटिनको मूल्य क्रमशः ४ हजार ४ सय र २ हजार २ सय रुपैयाँ पर्ने भाजुरत्नका प्रबन्धक राजेन्द्र शाक्यले जानकारी दिए । विद्यार्थीवर्गले यस्ता लालटिन बढी खरीद गर्ने गरेको उनले बताए ।